काठमाडौंकी उपमेयर खड्गीलाई नेविसंघले दियो धुलो र मास्क उपहार !
काठमाडौँ, २८ पुस -नेपाल विद्यार्थी संघले धुलो, धुवाँरहित काठमाडौँ निर्माण गर्न माग गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिका अगाडि एक घण्टा धर्ना दिएको छ ।
नेवि संघका नेता दीपक भट्टराईले महानगरलाई नमूना बनाउने अधिकार पाएको महानगर नै धुलो र धुवाँ हुँदा पनि चुप लागेर बसेकाले नेविसंघले खबरदारी अभियान चलाएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
नेविसंघ काठमाडौँ अध्यक्ष मनोज वैद्यले स्थानीय सरकार निर्माण भएको नौ महिनामा पनि धुलो, धुवाँ हटाउने सवालमा केही काम नभएकाले दबाबस्वरुप उक्त अभियान सञ्चालन गरिएको बताउनुभयो ।
उपप्रमुखलाई धुलो र मास्क बुझाइयो
धर्नासँगै नेवि संघले महानगरपालिका उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गीलाई काठमाडौँका विभिन्न भागबाट संकलन गरेर ल्याइएको धुलो र मास्क वितरण गरेका थिए ।
महानगरले बेवास्ता गर्दा दैनिक लाखौँ जनताले धुलो र धुवाँमा हिँड्नुपरेको भन्दै दबाबस्वरुप मास्क र धुलो वितरण गरेका हुन् ।
धुलो र मास्क बुझ्दै उपप्रमुख खड्गीले मेलम्ची खानेपानी काठमाडौँ उपत्यका ल्याउँदा खनिएका खाल्डोका कारण धुलो बढेको भन्दै यसलाई कम गर्न आफूहरुले सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेको बताउनुभयो ।
उपप्रमुख खड्गीले धुलोमुक्त काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्राथमिकतामा रहेको भन्दै मेलम्चीले खनेका खाल्डोलाई रातारात पुरेर कालोपत्र गर्न निर्देशन दिइसकिएको बताउनुभयो ।
धर्नामा नेवि संघका उपाध्यक्ष सागर परियार, कोषाध्यक्ष शिव रिमाल, नेताहरु हिमालदत्त श्रेष्ठ, मोती भण्डारी, सुशील तिमल्सेना, अर्जुन बम, एलिजा ढकाललगायतको सहभागिता रहेको थियो । रासस
अख्तियारको ‘स्टिङ अपरेशन’ मा ११ कर्मचारी, को–को परे फन्दामा ?
भन्सार कर्मचारीकै मिलेमतोमा ६ अर्बको राजश्व छली, ४२ फर्मविरुद्ध मुद्दा दर्ता
रसुवा भन्सारका तत्कालिन प्रमुखसहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा, ७५ करोड रुपैयाँ मागदाबी
निर्मला प्रकरणबारे सांसदलाई आईजीपीको जवाफ– कुखुरा चोर सधैं कुखुरा चोर मात्र रहँदैन
योगी आउने भएपछि जनकपुरमा सुरक्षा व्यवस्था कडा
कर्मचारी समायोजनमा उच्च प्रशासकको चलखेल, साना कर्मचारीको भविष्य अन्योलमा ?